Networking for System Administrator(SA) - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Networking ကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင် MCSA ဒါမမဟုတ် MCSE ကိုသာရွေးချယ်သင့်ပါတယ် အဲဒါမှသာ System Administrator တစ်ယောက်ရဲ့ Job Scope ကိုကာမိ့မှာပါ၊ ညီးအစ်ကို၊ မောင်နှမတစ်ယောက်စီတိုင်းကို ဝေမျှခြင်တာ တစ်ခုတည်းပါ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းလည်း စာမေးပွဲတွေဖြေဖို့ ကြိုးစားနေတုန်းပါဘဲ။ ဒီခေါင်းစဉ်းလေးကိုတော့ ဆက်ပြီးဆွေးနွေဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ Whoami77 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
pannuko, thura.it, zo
18-08-2008, 10:04 AM
ကျနောကတော့ MCSA တို့ MCSE တို့ ကို ဖြေဆိုဖို့ လောလောဆယ် အစီအစဉ်မရှိသေးပေမဲ့ Networking and system administration course တွေကိုတော့ တက်ရောက်သင်ကြားဖူးလို့networking နဲ့ ပတ်သက်ရင် နည်းနည်းပါးပါးတော့ ဆွေးနွေးလို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျနော်လည်းဘဲ မသိသေးတာတွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ် ဆွေးနွေမှုလေးတွေမှလည်း ပညာရပ်များတိုးပွားနိုင်တာကြောင့် အခုလိုဆွေးနွေးမှုကို ကြိုဆိုပါတယ်
ဘယ်ကနေစပြီး ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာတော့ အစ်ကိုတို့ ဘဲ စတင်ပေးပါဗျာ ကျနော်ရဲ့ ဆွေးနွေးမှုမှာ အမှားပါရင်လည်း ပြင်ဆင်ပြန်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်
[COLOR="Blue"][SIZE="1"]အကျိုးရှိလို့ အလုပ်လုပ်တာထက် အလုပ်လုပ်လို့ အကျိုးရှိစေတာက ပိုကောင်းပါတယ်
အကျိုးကို မျှော်ကိုးပြီး အလုပ်လုပ်ရင် စေတနာအားကို နည်းစေပါတယ်[/SIZE][/COLOR][LIST=1][/LIST]
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ kozaw.dagon အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
18-08-2008, 10:52 AM
MCSE MCSA တို့ကိုဖြေတာကောင်းပါတယ် ဒါပေမဲ့ တကယ်တတ်အောင်လေ့လာ သင့်ပါတယ် ဆရာကြီးလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး အခုအခါမှာ စာမေးပွဲအောင်အောင် လက်မှတ်ရအောင်ကြိုးစားတာက သိပ်ပြီးတော့ အခုခေတ်မှာမခက်လှပါဘူး တကယ် တတ်သိဖို့ကတော့ အချိန်ပေးရပါမယ် စာတွေဖတ်ရပါမယ် တကယ် စမ်းသပ်ကြည့်ရပါမယ် ကျနော်တခါတလေတွေ့ဘူးပါတယ် လက်မှတ်တွေအများကြီးရထားတဲ့သူတွေ တကယ်ခိုင်းကြည့်တော့ active directory ကိုဘယ်လိုသွားရမယ် users တွေကို ဘယ်လို create လုပ်ရမယ်ဆိုတာတောင်မသိတာတွေ့ရပါတယ် အကောင်းဆုံးကတော့ ပထမဆုံး ကိုယ်ဖြေ့မဲ့ဘာသာကို အရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်ပြီးမှ တတ်သိနားလည်တဲ့သူတွေကို မရှင်းတာမေးတာကောင်းပါတယ် တကယ့်တတ်ပြီးတော့ လက်မှတ်မရှိလို့လဲမဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီဘာသာတွေကိုဖြေထား လက်မှတ်ရထားတာ အလုပ် ရဖို့လွယ်ကူပါတယ် လိုအပ်တာရှိရင်ပြောပါ ကျနော်တို့လည်း ၀ိုင်းစဉ်းစားပေးပါ့မယ် ပြီးတော့ MCSE နဲ့ MCSA ဖြေဖို့ကို စဉ်းစားတဲ့အခါ ဘာသာရပ်နဲ့ အချိန်နဲ့ကို စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်ကိုယ်နိုင်သလောက်ပေါ့ ကျနော့်တုန်းကတော့ ပထမ ၆ လ လောက်ကို အကြမ်းဖျင်း ဖတ်ပါတယ် အဲဒီတုန်းက ၇ ဘာသာပါ MCSE အတွက်ပေါ့ အချိန်က ၁ နှစ် ရပါတယ် ၁ နှစ် အတွင်းမှာ ၇ ဘာသာ ပြီးအောင်ဖြေရတာပါ ကျနော်ကတော့ တကယ်တတ်ဖို့ကို ပိုအားပေးပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ moe_poung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
KznT, pannuko, waihtutpai, zo
MCSE MCSA တို့ကိုဖြေတာသိပ်ကောင်းတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်ပါ..အားကျမိပါတယ်..
ဂျူနီယာကတော့ ..networking and System Administration course ကို level I နဲ့ II တက်ဖူးတာလောက်ပဲရှိပါတယ်...လက်တွေ့အလုပ်မှာအသုံးပြု ချိတ်ဆက်ပေးနေရတာ ရှိတာမို့ ..နဲနဲပါးပါးလောက်တော့ ..ဆွေးနွေးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်..
တကယ်တော့ ...network ဟာ စာတွေ့များထက်..လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ရှိနေမှ.. net error တွေတော်တော်များများကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ...
ဖြစ်စေချင်တာကတော့ .လက်တွေ့များများရှိနေစေဘို့ ..အကြံပြုလိုပါတယ်...
21-08-2008, 10:56 AM
ပို့စ်4ခုအတွက်6ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း Networking စိတ်ဝင်စားပါတယ် ... လောလောလတ်လတ်တော့ အခြေခံလောက်ပဲတက်ပါတယ်..
သေသေချာချာ တစိုက်မတ်မတ် လေ့လာချင်ပါတယ်.... လိုအပ်မယ့် သင်တန်းကောင်းများ နှင့် အကြံဥာဏ်ကောင်းလေးများတက်နိုင်သလောက်လေးမျှဝေပေးကြပါ........အတွေ့အကြုံရဖို့ နေရာကောင်းလေးများရှိရင်လည်း လမ်းညွှန်ပေးပါ...
အလိုအပ်ဆုံးအချိန်မှာ အကြံဥာဏ် သေးသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့် အတွက် ခွန်အားပါ.......
ကျွန်တော် မေးလ်က mayphyuster@gmail.com ပါ.....
အခုအချိန်မှာ စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ လမ်းသစ်လျှောက်ဖို့ အားယူနေတုန်းပါ.....
[SIZE="3"][COLOR="Plum"]အချိန်တိုင်း သတိယနေဆဲ ကျောင်းတုန်းက အဖြစ်အပျက်များ[/COLOR][/SIZE]
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ may phyu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
may phyu ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by may phyu
21-08-2008, 12:17 PM
Originally Posted by may phyu
ကျွန်တော်လည်း Networking စိတ်ဝင်စားပါတယ် ... .....
ဟုတ်ကဲ့ပါ may phyu ခင်ဗျာ
ဘယ်ပညာမဆို စိတ်ဝင်စားရင် တက်လွယ်ပါတယ်
Networking နဲ့ ပတ်သက်လိုဘြဲဖစ်ဖြစ် အခြားဘယ်အရာနဲ့ ဘြဲဖစ်ဖြစ် လိုအပ်တဲ့အကူအညီရှိရင် ပြောနိုင်ပါတယ်ဗျာ မြန်မာမိသားစုဝင်များအနေဖြင့်လည်း ကူညီနိုင်သလို ကျနော်သိသလောက်တွေဆိုရင်လည်း ကူညီဖို့ အသင့်ပါဗျာ
အခုလည်း may phyu ရဲ့mail ကို ကျနော် invite လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်ဗျာ
21-08-2008, 04:53 PM
Originally Posted by ကိုဇော်.ဒဂုံ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မြန်မာမိသားစု အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး အပါအ၀င် ပါ ........
ကျွန်တော် တက်စွမ်းတဲ့ တစ်နေ့ကျရင်လည်း အကောင်းဆုံး ကူညီပါဝင်ပါ့မယ်.....
ကျွန်တော်ကတော့ KMD ကနေ network engineering ပြီးထားပါတယ်. ဒါပေမဲ့ ခုထိတော့ဘာမှရေရေရာရာမရှိပါဘူး. စမ်းတ၀ါးဝါးပါပဲ.member များအနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအကြံပေးကြပါအုံး။ ကျွန်တော် network နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားပါတယ်.. CCNA တို့ဘာတို့ ကရော ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲ ခင်ဗျာ.. သင်တန်းတွေလဲ ဘယ်သင်တန်းက ကောင်းတယ် မကောင်းဘူးဆိုတာ ညွှန်ပြပေးကြပါအုံး ဗျာ...........
Find More Posts by samelann
23-10-2008, 07:12 PM
24-10-2008, 02:03 AM
ဘယ်သူ ဘယ်က စဆွေးနွေးမလဲ ကြည့်နေတာဗျ။ ကျနော် လည်း ၀ါး တားတား လေးပါပဲ။ ကံကောင်းပြီး ကျနော် သိထားတာပါရင် ၀င်ဆွေးနွေးမယ်လေ star topology နဲ့ Bus topology ကိုတော့ ပေါင်းသုံးဖူးတယ်ဗျ။ ဆွေးနွေးပွဲလေး စပေးပါဗျို့
Mr.whoami77 ရေ ခင်ဗျား စထားတဲ့ ခေါင်စဉ် ကို ဆွေးနွေးချင် တဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို စတင်ဆွေနွေပေး စေချင်ပါတဃ်။
Networking နယ်ပယ်ဆွေးနွေးကြမယ် ဆိုရင် Server ပိုင်း နဲ့ Network ပိုင်း နှစ်ခုမှ တစ်ခုခုကို ရွေးချယ် ဆွေနွေးစေချင် ပါတယ်။
server ပိုင်းကိုဆွေးနွေးချင်ရင် Microsoft server service တွေကိုဆွေနွေးတာ မြန်မာပြည် မှ လူငယ်တွေအတွက် အဆင်ပိုပြေပါတယ်။
server ပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်လို့ AD , DNS , DHCP ,RRAS,IIS, စတဲ့ service တွေကိုအသေးစိတ် ဆွေးနွေး ပေးစေချင် ပါတယ်။
Network ပိုင်းကဆိုရင် Subnetting , TCP/IP , Switch ,Router (Layer2,3) ,EIGRP ,OSPF ,NAT ,Vlans ,VPN အစရှိတဲ့ service တွေကို အသေးစိတ် ဆွေးနွေး စေချင်ပါတယ်။
Basic Networking ကတော့ ပျင်စရာကောင်း ပါတယ်။ ဥပမာ LAN လောက်ကိစ္စ ဆွေးနွေးနေ ရင် အချိန်ကုန် ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ Real World ကိစ္စတွေ အဓိက ထား ဆွေနွေးပေး
တာဟာ တကယ့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ အကျိုးရှိစေမှာ ဖြစ်ပြီး ခင်ဗျား တို့ Systems Administrator တွေမှာ error ပေါင်းများစွာနဲ့ အလုပ်ရှုပ် နေတာကို အားနာလို့ပါ။
ခေါင်းစဉ်တပ် ထားပြီး ဆွေးနွေးပေးမယ့် Mr.whoami77 ကို အထူးကျေးဇူးတင်လျက်
30-10-2008, 11:02 AM
ကျနော့်အနေနဲ့ ဆွေးနွေးမှာကတော့ Network တစ်ခုမှာ Subnet တစ်ခုဟာလဲ Network Administrator တစ်ဦးအတွက် တစ်စိတ်တစ်ဒေသ အထောက်အကူ ပြုလို ဘာဘဲဗျာ ဘာလိုလဲဆိုတော့ မိမိရဲ့ Network တစ်ခုမှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ ကွန် အရေအတွက်ကိုဘဲ IP ပေးမယ်ဆိုရင် Subnet Mask နဲ့ သတ်မှတ်လို့ ပါဘဲ
မိမိမှာ Router တစ်လုံးနဲ့ မိမိ Network ကို IP တွေပေးမယ်ဆိုရင် Client PC တွေကလည်း အလုံး (၃၀)လောက်ဘဲရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒီ PC တွေအတွက်ဘဲ IP တွေကိုဘဲပေးချင်တယ် နောက်ထပ် PC (or) Laptop တွေ မိမိ Network ထဲဝင်လာပြီး IP ယူလို့ မရအောင် Subnet Mask နဲ့ ပိတ်လို့ ရပါတယ်
တကယ်လို့ များ မိမိ Router က
Gate way -192.168.0.1 ဆိုပြီးရှိမယ် အဲဒီ Router ကနေ IP တွေကို ပေးနေမယ်ဆိုရင်
PC အလုံးပေါင်း ၂၅၄ လုံးလောက် သူ့ ကို Connect လုပ်နိုင်ပါတယ် IP တွေလည်းယူပြီး မိမိ Network အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်၍ Resource တွေကိုလည်း Access လုပ်နိုင်ပါတယ်
မိမိက PC အလုံး (၂)လုံး စာဘဲ မိမိ Network မှာ IP ပေးချင်တယ်ဆိုရင် Subnet mask ကို 255.255.255.252 ထားရပါ့မယ်
မိမိက PC အလုံး (၆)လုံး စာဘဲ မိမိ Network မှာ IP ပေးချင်တယ်ဆိုရင် Subnet mask ကို 255.255.255.248 ထားရပါ့မယ်
မိမိက PC အလုံး (၁၄)လုံး စာဘဲ မိမိ Network မှာ IP ပေးချင်တယ်ဆိုရင် Subnet mask ကို 255.255.255.240 ထားရပါ့မယ်
မိမိက PC အလုံး (၃၀)လုံး စာဘဲ မိမိ Network မှာ IP ပေးချင်တယ်ဆိုရင် Subnet mask ကို 255.255.255.224 ထားရပါ့မယ်
မိမိက PC အလုံး (၆၂)လုံး စာဘဲ မိမိ Network မှာ IP ပေးချင်တယ်ဆိုရင် Subnet mask ကို 255.255.255.192 ထားရပါ့မယ်
မိမိက PC အလုံး (၁၂၆)လုံး စာဘဲ မိမိ Network မှာ IP ပေးချင်တယ်ဆိုရင် Subnet mask ကို 255.255.255.128 ထားရပါ့မယ်
မိမိက PC အလုံး (၂၅၄)လုံး စာဘဲ မိမိ Network မှာ IP ပေးချင်တယ်ဆိုရင် Subnet mask ကို 255.255.255.0 ထားရပါ့မယ်
အဲဒီလိုသာ Subnet mask နဲ့ ပိတ်ထားမယ်ဆိုရင် သတ်မှတ်တဲ့ PC ထက်ပိုပြီ အဲဒီ Network မှာ IP ယူလို့ မရပါဘူး
မိမိအနေနဲ့ ဘာမှ Config မလုပ်ချင်ဘူး ဆိုရင် Default ဖြစ်တဲ့ 255.255.255.0 သာထားလိုက်ပါရပါတယ်
အခုဆွေူးနွေးသွားတာက (192.168.0.* )အုပ်စုပါ အခြားအုပ်စုတွေလည်း အလားတူပါဘဲဗျာ
Last edited by kozaw.dagon; 30-10-2008 at 11:40 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ kozaw.dagon အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုတာတေ, ပွင့်ဖူးမွန်, ဖန်ဆင်းရှင်, ဖယောင်း, ဟိန်း, ကြက်ဥခေါက်မုန့်, AZM, blackNwhite, kkawave, pannuko
အကိုအာကာ ကျွန်တော်ကနက်ဝက်ပိုင်းကိုစပြီးလေ့လာနေပါတယ် ဒါပေ့မဲနက်ဝက်ပိုင်းကအလုပ်ရဖို့အခြားလိုင်းတွေထက်ပိုပြီးခက်သလိုပိုပြီးဖိအားများနေတယ်အဲ့ဒါကျေးဇူးပြုပြီူးကျွန်တော်
ကိုအကြံညံလေးပေးပါဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်ပြီးနက်ဝက်ပိုင်းမှာပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဘာတွေသိထား
Visit ဇွဲပြည့်အောင်'s homepage!
Find More Posts by ဇွဲပြည့်အောင်
31-10-2008, 01:23 PM
ကိုဇော်(ဒဂုံ) ရဲ့ ဆွေးနွေးချက် ကို အောက်ပါEbook နဲ့အားဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
How to subnet in your heard .
ဖတ်ပါမှတ်ပါ လေ့လာ စမ်းသပ်ပါ။
I apologize to all . I didn't have much time to teach detail.
Last edited by tu tu; 24-11-2008 at 10:48 PM.. Reason: လင့်ခ်ဖြည့်ရန်
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ koarkarhtut အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
kozaw.dagon, spaceboy, thura.it
24-11-2008, 10:37 PM
Post #14 က koarkarhtut ပြောတဲ့ File ကို Download ဆွဲလို့ မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်.. အကို Link လေး ၁ချက် လောက်ပြန်စစ်ပေးစေချင်ပါတယ်.. ကျေးဇူးပါ
လင့်ခ်ကအကောင်းပါ omen20 ရေ...
အဲ့ဒီကနေပဲဒေါင်းပြီး ifile လင့်ခ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Last edited by tu tu; 24-11-2008 at 10:50 PM..
ပို့စ် 1 ခုအတွက်5ဦးမှကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
MCSE အတွက် ဖြေမယ်ဆိုရင် သူ.အတွက် စာမေးပွဲ တွေက Core Exams ( Six Exams) နဲ. Elective Exam ( One Exam ) ဖြေရမှာပါ ။
Core Exams မှာ ပါဝင်တဲ. မေးခွန်းတွေက
1. Four Networking System Exams
2. One Client Operation System Exams
3. One design exam
Core Exams ( Six Exams)
1.Four Networking System Exams:
Exam -70-290: Managing and MaintainingaWindows Server 2003 ENVIRONMENT.
Exam -70-291: Implementing, Managing and MaintainingaMicrosoft Windows Server 2003 Network Infrastructure.
Exam -70-293: Planning and MaintaingaWindow Server 2003 Network Infrastructure.
Exam -70-294: Planning, Implementing and MaintainingaWindows Server 2003 Active Directory Infrastructure.
အထက်ပါ ပါတဲ. မေးခွန်း နံပါတ်တွေအားလုံးဖြေဆိုရမဲ.အပိုင်းပါ ။
2.One Client Operating System Exams:
Exam -70-620: Window Vista, Configuration
Exam -70-270: Installing, Configuration and Administering Microsoft Window XP Professional.
Exam -70-210: Installing,Configuration and Administering Microsoft Window 2000 Professional.
ဒီအပိုင်း မှာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ မေးခွန်းတခု ထဲကို ပဲဖြေနိုင်ပါတယ် ။ ကျနော် အကြံပေးရရင်တော. 70-620 ကိုဖြေစေချင်ပါတယ် ။
Exam 70-297: DesigningaWindow Server 2003 Active Directory and Networking Infrastructure.
Exam 70-298: Designing Security foraWindow Server 2003 Network.
ဒီ ဒီဇိုင်း မေးခွန်းမှာ ကျနော်မဖော်ပြထားတဲ. ကျန်တဲ.မေးခွန်းတွေလဲအများကြီးရှိပါသေးတယ် ။ ဒီ၂ခုထဲက တခုကိုဖြေရင်လဲ ရပါတယ် ။ ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် ။
...................................................................... '' ...............................................................
Elective Exam ( One Exam )
1. Exam 70-350 : Microsoft ISA Server ( 2004 )
ကျန်တဲ.မေးခွန်းတွေရှိပါသေးတယ် ။ ကျနော်ရွေးချယ်တဲ.မေးခွန်းလေးတင်ထားတာပါ ။
အဲ.ဒါတွေ အားလုံး ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ
၇ ဘာသာဖြေပြီးရင်တော. MCSE ကိုရမှာပါ ။
MCP = client တခုခု ကိုဖြေရင် ရပါပြီ ။
MCSA = ဘာသာခွဲ ၄ခုဖြေရင်ရပါတယ်။
အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို. မျှော်လင်.မိပါတယ် ။
ကိုရဲအောင်သူရေးသားထားတာပါ ။ မူရင်းပို.စ်က http://forum.blackdream21.com/viewtopic.php?f=28&t=11 ပါ ။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ Mryotesoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ညိုမင်းလူ, မောင်မျိုးသာ, အောင်မိုးထွန်း, godoflove, spaceboy
Find More Posts by Mryotesoe
ကျွန်တော်ကတော့ နက်ဝ အပိုင်းကို အရမ်းလေ့လာချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဗျာ အခက်အခဲတွေ များတယ်ဗျာ အကုန်လုံးကို သိချင်နေတယ် တတ်ချင်နေတယ်ဗျာ စိတ်တွေများတော့ လမ်းပျောက်နေတယ် ဘယ်ကိုသွားရင်ကောင်းမလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ပေ့ါ
အခု ကျွန်တော် နက်ဝ အပိုင်း ကို လေ့လာနေပါပြီ...အခက်ခက်လေးတွေရှိရင် အစ်ကို တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ညီတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ......မြန်မာလို နက်ဝနဲ့ပတ်သက် တဲ့ စာအုပ်ကောင်းကောင်းလေးတွေရှိတဲ့ ၀က်လိပ်စာလေးတွေ ရှိရင် ပေးကြပါလို့ လည်း တောင်းဆိုချင်ပါတယ် .....၀ိုင်းတော်သားများနှင့် မြန်မာမိသားစု ဖိုရမ်ကြီး ကို အထူးကျေးဇူးတင်လျှက်။။။။။။။။။။။။။။။။။။
Find More Posts byုကိုထွေး
ပို့စ် 30 ခုအတွက် 150 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုထွေးရေ နက်ဝပ်ကိုစတင်လေ့လာနေသောရော-- လေ့လာနေဆဲ- စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ သူတွေပါ အသုံးပြုလို့ရအောင် ဆရာဦးဇော်လင်းရေးထားတဲ့ နက်ဝပ် အသုံးပြုမှုလမ်းညွှန်စာအုပ်ပါ။ ဖိုရမ်မှာ ကိုရဲအောင်က စကင်ဖတ်ပြီးတင်ပေးထားပါတယ်။ သွားယူလိုက်ပါ။ နက်ဝပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့ သူတွေ ရှိရင် ကူညီပေးဘို့ အသင့်ပါဘဲ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ နုမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by နုမောင်
ညီကိုတွေ ... ကျနော် စဉ်းစားမိတာလေးတစ်ခုနော်။ ခေါင်းထဲရှုပ်နေလို့ ပါဗျာ ပြောပေးကြပါဦး။ ကျနော် တို့ သိပြီး ဖြစ်တဲ့ twisted pair မှာ transmit လုပ်တဲ့ကြိုးက ၂ ချောင်း၊ receive လုပ်တဲ့ကြိုးက ၂ ချောင်းဗျာ။ ကျန်တဲ့ကြိုး ၄ ချေုာင်းက unuse ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ အဲဒီ Unuse ကြိုးလေးချောင်းကို စိတ်ထဲသိပ်ပြီး ဘ၀င်မကျဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ စာအုပ်တွေ ထဲလည်းမတွေ့မိဘူး။ ကျနော် ညံ့တာဖြစ်မယ်။ သိတဲ့ ညီကိုတွေက အဲဒီ unuse ကြိုးတွေ အကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ပြောပြပေးကြပါဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
27-11-2008, 05:20 PM
ညီလေး Bonge ရေ Cable အကြောင်း ခေါင်းစားမနေပါနဲ့ အချိန်ကုန်ပါတယ်။ Switching & Routing Protocol တွေလေ့လာတာပိုကောင်းပါတယ်။
29-11-2008, 09:01 AM
unused ကြီုးတွေက ....... research အတွက်ထားတာပါ ...... 100 MB အတွက်ဆိုရင် တော့4ကြိုးအနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ် ။.... send နဲ့ receive အတွက်ပါ ။..... ဒါပေမဲ့ အခုအသုံးများနေတဲ့ 1G speed ဆိုရင်တော့ အဲဒီ unused မရှိတော့ပါဘူး ။.... သူက6ကြိုးလုံးမိနေမှ ရပါတယ်......
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ cyberhack အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by cyberhack
Originally Posted by cyberhack
ဒါပေမဲ့ အခုအသုံးများနေတဲ့ 1G speed ဆိုရင်တော့ အဲဒီ unused မရှိတော့ပါဘူး ။.... သူက6ကြိုးလုံးမိနေမှ ရပါတယ်......
.. ဒါကို ကျနော် သိပ်မရှင်းဘူးဗျ။ ကြိုးကွားသွားတာလား ? တစ်ခြားကြိုးကို ပြောင်းသုံးတာလား ? ဘယ်လိုကြိုးမျိုးလဲ ? ဒီမှာတော့ speed ပဲကွာတယ်။ ကြိုးမကွာဘူး ။ ကိုcyberhack အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါလားဗျာ ...
bongeရေ ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောရရင်ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ကြိုးက၄ကြိုးပဲသုံးတာ၊ ဒါပေမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းမေ့နေလို့ ကျန်တဲ့ကြီုးတွေထဲက နောက်ဆုံးကြိုး နှစ်ကြိုးပဲတကယ်မသုံးတာ ကျန်တဲ့ကြိုးတွေကသုံးသေးတယ်။ ဘာအတွက်လည်းတော့မသိ
21-02-2009, 11:01 AM
network နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အခြေခံလေးတွေကို သိချင်..တက်ချင် ..ကျွမ်းကျင် ချင်ပါတယ်..မြန်မာမိသားစုမှာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ
21-02-2009, 11:10 AM
AD ဆိုတာ domain တစ်ခုကိုhandle လုပ်ပေးတဲ့directory services ပါ။ သူကdomain တစ်ခုမှာအရေးအကြီး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူကdomain controller ဖြစ်လို့ပါပဲ။ သူdown သွားရင် ကျန်တဲ့စက်တွေကdomain ထဲမှာရှိတဲ့ နက်ဝက်resource တွေကိုသုံးလို့ ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်သူကို ဂရုစိုက်ရပါတယ်။ domain downသွား နက်ဝက်သမားတွေပျားတုတ်တာပါပဲ။ AD ဆောက်မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး server ကို client တစ်လုံးနဲ့ အရင်ချိတ်ဆက်ထားရပါတယ်။ ချိတ်မထားရင်တော့ AD ဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရရင်လည်းပြည့်စုံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ configured your server ကနေဆောက်ရပါတယ်။ ကျန်တဲ့server role sတွေလည်းတင်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်အလိုအရဆိုရင်တော့AD ကို ကျန်တဲ့ server role တွေမတင်စေချင်ပါဘူး။
AD ဆောက်ပြီရင် Administrative Tool -Active Directory computer and User အောက်မှာ user တွေကိုcreat လုပ်လို့ရပါတယ်။ user တွေကို create လုပ်တဲ့နေရာမှာ သူတို့ right တွေကိုမုန်ကန်အောင်ပေး ဖို့အရေးကြီးပါတယ် အားလုံးဟာadmin right ရနေရင် ပြသနာပါ။ user create ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ workstation ကနေ domain ကိုချိတ်ဆက်ရပါတော့မယ်။ workstation စက်ကိုသွားပါ
My Computer - properties - computer name - change အဲဒီအတိုင်းသွားပြီးရင် ကျွန်တော်တို့စချိတ်ပါတော့မယ်။ domain ဆိုတဲ့အကွက်မှာ ကိုတည်ဆောက်ထားတဲ့domain ရဲ့နာမည်ထည့်ပါ
ပြီး ကျွန်တော်တိုserverမှာ create လုပ်ထားတဲ့user name -password ကိုထည်ပြီးချိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင်
computer restart ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ workstation ပြန်တက်လာရင် server ရဲ့my networkplace မှာသွား
ပြိး refresh လုပ်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ချိတ်ထားတဲ့workstation ပုံတက်လာပါလိမ့်မယ်။
Arr Chit, bluephoenix, spaceboy
21-02-2009, 12:05 PM
Find More Posts by aungkyawmoe
ကြိုက်တယ်ဗျာ... အကိုတို့ ရဲ့ ရေးသားချက်တွေကို.... အားပါတရ လေ့လာမှတ်သားနေပါတယ်။ ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးကြပါ.... ဖြစ်နိုင်ရင် MCSA and MCSE နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအ၇ာတွေကို အလေးပေးပြီး တတ်အားသလောက် ဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာ... ။
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 11:34 AM